अर्थ-वाणिज्य – Page 8 – Nepal24Hours.com – Integration Through Media ….!
९ आश्विन २०७७, शुक्रबार १०:४७ English
घट्यो सुनको भाउ, कति छ कारोबार मूल्य ? ९ असार २०७७, मंगलवार ११:२८
काठमाडौँ, ९ असार । मंगलबार सुनचाँदीको भाउ घटेको छ । सोमबार तोलाको ९१ हजार रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावाला सुनको भाउ आज तोलामा ४ सय रुपैयाँले घटेर ९० हजार ६ सय रुपैयाँमा आईपुगेको छ । तेजावी सुन पनि आज तोलामा ४ सय रुपैयाँले नै घटेर ९० हजार १६० रुपैयाँमा आईपुगेको छ । चाँदीको भाउ पनि आज..
माथिल्लो तामाकोशीको जटिल क्षेत्रको निर्माण यही हप्ता ८ असार २०७७, सोमबार १४:२७
रासस, दोलखा, ८ असार । सरकारले लकडाउन गरेपनि एकाध दिन बाहेक काम नरोकिएको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण र जटिल निर्माणसम्बन्धी काम यसै साता सकिने भएको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना माथिल्लो तामाकोशीको जटिल मानिएको दुई ठाडो सुरुङको कामसमेत लकडाउनको समयमा..
सुन इतिहासकै महँगो, तोलाको ९१ हजार पुग्यो ८ असार २०७७, सोमबार ११:२१
काठमाडौँ, ८ असार । आज सोमबार सुनको भाउ हालसम्मकै महँगो भएको छ । आइतबार तोलाको ९० हजार ६ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावाला सुनको भाउ आज तोलामा एकैपटक ४ सय रुपैयाँले बढेर तोलाको ९१ हजार रुपैयाँ कायम भएको छ । आज तेजावी सुन पनि तोलामा ४ सयले नै बढेर प्रतितोला ९० हजार ५६५ रुपैयाँ पुगेको छ..
सुनको भाउ इतिहासकै उच्च मूल्यमा ७ असार २०७७, आईतवार ११:०१
काठमाडौँ, ७ असार । आज असार ७ गते आइतबार सुनको भाउ इतिहासकै महँगो भएको छ । यसअघि उच्च मूल्य ८९ हजार ९ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावाला सुनको भाउ आज तोलामा एकैपटक ७ सय रुपैयाँले बढेर तोलाको ९० हजार ६ सय पुगेको छ । तेजावी सुनको भाउ पनि तोलामा ७ सयले नै बढेर तोलाको ९० हजार १६० पुगेको छ..